ကွဲပြားခြားနားသောပြတင်းပေါက်အတွက် EXCEL ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို - EXCEL ကို - 2019
ကွဲပြားခြားနားသောပြတင်းပေါက်အတွက် Microsoft က Excel ကိုစာရွက်စာတမ်းဖွင့်လှစ်
ဂီတဖန်တီးအစီအစဉ်များများပြားသောအနက်တစ်ဦးအတွေ့အကြုံကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူကိုဆုံးရှုံးရနိုင်ပါတယ်။ ယနေ့အထိ (သို့မှသာအလားတူဆော့ဖျဝဲကိုခေါ်), ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံစက်, အတော်လေးတွေအများကြီးညာဘက်ရွေးချယ်မှုဒါရိုးရှင်းသောမဟုတ်ပါဘူးအောင်လျက်ရှိ၏။ လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် Full-အထူးအသားပေးဖြေရှင်းချက်တစ်ခုမှာ - Reaper ။ ဒါဟာအစီအစဉ်၏နိမ့်ဆုံးပမာဏကိုနှင့်အတူအမြင့်ဆုံးစွမ်းရည်ရချင်သူမြား၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ လက်ျာဖြေရှင်းချက်အပေါ်တစ်ဦးအလုပ်ဘူတာရုံဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရနိုင်သည်ကို "တဦးတည်းအတွက်အားလုံး" ။ ဒါကောင်းသောအရာကိုအကြောင်းကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြပါ။
တစ်ဂီတပါတီများ၏ဖန်တီးမှုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သော Reaper အတွက်အဓိကအလုပ်, မည်သည့်အရေအတွက်ကိုဖြစ်နိုင်သည့်အပုဒ် (ပုဒ်), ပေါ်ရာအရပျကြာပါသည်။ ဒါဟာသည်, သူတို့တစ်ဦးစီပေါ်တွင်သင်အနည်းငယ် tools တွေကိုသုံးနိုငျ, ပရိုဂရမ်တွင်ပုဒ်အသိုက်နိုင်မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီ၏အသံသည်အသံပုဒ်လွတ်လပ်စွာအခြားမည်သည့်ဂတိတော်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်နှင့်ဝသကဲ့သို့လွတ်လပ်စွာလုပ်ငန်းများ၌နိုင်ပါသည်။
မည်သည့်ဒေါ်နှင့်အတူအမျှ Reaper က၎င်း၏အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် (ကစားရန်) မှတ်ပုံတင်ရန်အသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုကို virtual တူရိယာအစုတခုရှိပါတယ်, ဗုံ, ကီးဘုတ်, ညှို့, etc ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို, သင်တန်း, Multi-လမ်းကြောင်းအယ်ဒီတာထဲမှာဖော်ပြပါတယ်လိမ့်မည်။
ဤအစီအစဉ်များအများစု၌ရှိသကဲ့သို့, တူရိယာနှင့်အတူပိုမိုအဆင်ပြေအလုပ်အတွက်စန္ဒယား Roll သင်မှတ်ပုံတင်နိုင်ရှိရာပြတင်းပေါက်များနှင့်သီချင်းဆိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအကြောင်းအရာသည် Ripert အတွက်အများကြီးပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ Ableton တိုက်ရိုက်အတွက်ထက် လုပ်. FL Studio ကအတွက်သူတို့နှင့်အတူဘုံတစ်ခုခုရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဘက်ပေါင်းစုံ Virtual Machine
Reaper အတွက် plug-in ၏အမည်စာလုံး JS နှင့်အတူစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်အတော်လေးအနည်းငယ်ထိုကဲ့သို့သော tools တွေရှိပါတယ်အဆိုပါအစီအစဉ်၏ installation ကိုဖြည့်စွက်။ သူတို့ရဲ့လှည့်ကွက် plugin ကို၏ source code ကိုယင်ကောင်အပေါ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်နှင့်အပြောင်းအလဲများချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်သို့ရောက်လိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ဤအစီအစဉ်ကိုသင် Multi-လမ်းကြောင်းအယ်ဒီတာအတွက်သတ်မှတ်ထားသည့်တစ်ဦးချင်းစီဂီတတူရိယာ, အဖြစ်တစ်ဖွဲ့လုံးကတစျခုလုံးကိုတေးဂီတရေးစပ်သီကုံးခြင်းအသံတည်းဖြတ် process လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, Reaper ကိုစေလွှတ်ထားတဲ့လိုင်းများနှင့် tools တွေကိုတစ်ဦးအဆင်ပြေရောနှောပေးပါသည်။
ဒီကို Workstation အတွက်အသံအရည်အသွေးတိုးတက်စေရန် Equal, Compressor, reverbs, filter များ, နှောင့်နှေး, အစေးနှင့်ပိုပြီးအပါအဝင်ဆော့ဗ်ဝဲကိရိယာ၏ကြီးမားသောစုဆောင်းခြင်း, ရှိပါတယ်။
Multidorozhechny အယ်ဒီတာမှပြန်လာပါကဒီ window တွင်သင်သည်များစွာသော parameters တွေကိုများအတွက်စာအိတ် Ripert အသံသည်အပုဒ်တည်းဖြတ်နိုင်သည်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကျိုးနပ်သည်။ သူတို့အားအသံအတိုးအကျယ်, ဒယ်အိုး, တစ်ဦးအထူးသဖြင့် plugin ကိုခြေရာခံဖို့ဒီဇိုင်း MIDI-settings ကိုများထဲတွင်။ စာအိတ်၏ Edit ဒေသများ linear ဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ချောမွေ့အသွင်ကူးပြောင်းမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ထောက်ပံ့ရေးနှင့် MIDI တည်းဖြတ်ရေး
ယင်း၏သေးငယ်တဲ့အသံအတိုးအကျယ်နေသော်လည်း Reaper နေဆဲဂီတနဲ့ audio တည်းဖြတ်ရေးအတွက်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား။ ဒါဟာဒီထုတ်ကုန်ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ရေးသားဖို့ကိုဘယ်လို MIDI ထောက်ခံသော်လည်းယခုထိဒီဖိုင်များကိုတည်းဖြတ်များအတွက်လုံလောက်သောအခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူသာသဘာဝပါပဲ။ ထို့အပွငျကဒီမှာ MIDI-ဖိုင်တွေကို virtual တူရိယာနှင့်တူညီသောလမ်းကြောင်းအပေါ်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ MIDI ထောက်ခံမှုအကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်ကတည်းကက Reaper အဖြစ်ဒေါ်ကိုလေးစားခြင်း, ကီးဘုတ်, တစ်စည်စက်နှင့်အခြားမည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်သောကွန်နက်ရှင်အား MIDI-devices များ, ထောက်ခံပါတယ်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကျိုးနပ်သည်။ ဒီပစ္စည်းကိရိယာများအသုံးပြုခြင်း, သင် play နှင့်စံချိန်ဂီတ, ဒါပေမယ့်လည်းအစီအစဉ်တွင်ရရှိနိုင်အမျိုးမျိုးသောဘူးသီးနှင့်လက်ကိုင်, ထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်ပါတယ်မသာ။ သင်တန်း၏, သတ်မှတ်ချက်အတွက် pre-configure အဆိုပါချိတ်ဆက် tool ကိုရန်လိုအပ်ကြောင်း။
WAV, FLAC အ, AIFF, ACID, MP3 OGG, WavePack: Reaper အောက်ပါအသံဖိုင်ကို formats ထောက်ခံပါတယ်။
Third-party plug-ins များကိုများအတွက်ပံ့ပိုးမှု
လောလောဆယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံကို Workstation အဘယ်သူအားမျှမိမိတို့ကိုယ်ပိုင် tools တွေကိုအစုတခုကန့်သတ်သည်မဟုတ်။ Ripert ကိုလည်းခြွင်းချက်တခုကိုမဟုတ် - က VST, DX နှင့်အာဖရိကသမဂ္ဂထောက်ခံပါတယ်။ ဤသည်က၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို Third-party VST plug-in ကိုကို formats, VSTi, DX, DXi နှင့်အာဖရိကသမဂ္ဂ (သာနဲ့ Mac OS ပေါ်) ကတိုးချဲ့နိုင်ဆိုလိုသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့ကို virtual တူရိယာနှင့်ကိရိယာများအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်ရောနှောများတွင်အသုံးပြုအသံတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
Reaper အသံ Forge ရဲ့, Adobe ကစာရင်းစစ်အခမဲ့ပေး Audio Editor ကိုများနှင့်အခြားသူများအပါအဝင်တခြားအလားတူဆော့ဖ်ဝဲ, အတူညှိနိုင်ပါတယ်။
အလားတူအစီအစဉ်များကို Reaper နှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းချိတ်ဆက်အပြင်ကိုလည်းထောက်ပံ့သော applications များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး ReWire နည်းပညာ၏အခြေခံပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Reaper မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်အခြားချိတ်ဆက်ပစ္စည်းတွေကနေအသံဖမ်းထောက်ခံပါတယ်။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦး multitrack အယ်ဒီတာများ၏အပုဒ်တွေထဲကတစ်မိုက်ခရိုဖုန်းကနေ, ဥပမာ, အသံ, ဒါမှမဟုတ်တခြားကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်ထားသောအခြားပြင်ပကိရိယာမှလာမယ့်အသံ signal ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အသံဖိုင်ကို formats များအတွက်ပံ့ပိုးမှု။ ထို program ၏ဤအင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုခြင်း, အသုံးပြုသူ Third-party အသံ (နမူနာ) ၏င်း၏စာကြည့်တိုက်မှထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာစီမံကိန်းစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းလျော် format နဲ့ Ripert ထဲမှာမဖြစ်ပြီး, သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်မည်သည့်ဂီတကစားသမားကိုနားထောင်နိုင်မအသံဖိုင်အဖြစ်, သင်ပို့ကုန် feature ကိုအသုံးပြုရပါမည်။ ရိုးရှင်းစွာလမ်းကြောင်း format ရဲ့တပ်မက်လိုချင်သောအပိုင်းကိုရွေးချယ်ပါနှင့်သင့် PC ကိုပေါ်မှာ save လုပ်ပါ။
အသံကအတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အတွက်မိမိအထားအများအပြားအသုံးဝင်သောနှင့်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ရှိခြင်းစဉ် 1. အဆိုပါအစီအစဉ်ရဲ့ hard drive ထဲမှာနိမ့်ဆုံးအာကာသယူထားသော။
2. အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေသော graphical interface ကို။
3. Cross-platform ကို: အကို Workstation ကို Windows, Mac OS နဲ့, Linux ကိုအပြေးကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။
4. Multi-level ကိုပြန်လုပ်ရ / ပြန်လုပ်ရန်အသုံးပြုသူလုပ်ရပ်တွေကို။
1. အဆိုပါလစာအစီအစဉ်တရားခွင်ဗားရှင်းရဲ့တရားဝင်မှုရက်ပေါင်း 30 ဖြစ်ပါတယ်။
2. အဆိုပါ interface ကို Russified မဟုတ်ပါဘူး။
3. သင်ဂရုတစိုက်စစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ရန်ပြင်ဆင်ထားရန်အတွက် setting တွင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းတူးရမယ်ပထမဆုံးအကြိမ်။
အဘယ်သူ၏နာမကိုအမှီအသံထုတ်လုပ်မှုအင်ဂျင်နီယာနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများအတွက်အင်္ဂလိပ် Rapid ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုအတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ် Reaper အစီအစဉ်, ဂီတဖန်တီးမှုနှင့်တည်းဖြတ်အသံဖိုင်တွေကိုအဘို့ကြီးစွာသောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ အဆိုပါဒေါ်ဒီပါဝင်သောအသုံးဝင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတစ်အစုံ, သင်သည်၎င်း၏အသေးစားအသံအတိုးအကျယ်ကိုစဉ်းစားအထူးသဖြင့်အခါ, အထင်ကြီးသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအိမ်မှာဂီတဖန်တီးသူအများအပြားသည်အသုံးပြုသူများအကြားဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုထိုကဲ့သို့သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သုံးစွဲဖို့ထိုက်သည်ကိုသင်သာတကယ်ကျိုးနပ်သောထုတ်ကုန်အဖြစ် Reaper အကြံပြုနိုင်ပါသည်, ဆုံးဖြတ်။
Sony ကအက်ဆစ် Pro ကို အကွောငျးရငျး NanoStudio SunVox
Reaper - သင်ဖန်တီးပြင်ဆင်တည်းဖြတ် Multichannel အသံနိုင်ပါတယ်တဲ့အစွမ်းထက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကို Workstation ဖြစ်ပါသည်။
ရေးသားသူ: Cockos ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း
ကုန်ကျစရိတ်: $ 60
Size ကို:9MB အထိ